Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app 4.0.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.0.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား လူေနမႈပံုစံ Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app
Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
လှပသောနှုတ်ဆက်ခြင်း frames များကိုဖန်တီးလျက်သင့်ချစ်ရသူအံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ အရမ်းသင့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျမ်း Add!
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓာတ်ပုံကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားဓာတ်ပုံဘောင် Make ဓာတ်ပုံဘောင်, ဝေါလ်ပေပါဓာတ်ပုံကိုဘောင်ပိုလုပ်ဖို့ပုံရိပ်ကိုကတ်များ ecards & ရာများစွာကိုအပေါ်စာသားကိုကိုးကား ..
ဤသည်သို့မဟုတ်အားလုံးကိုအခါသမယ & ရည်ရွယ်ချက်အယ်ဒီတာ app ကို '' ပုံရိပ်ပေါ်ဓာတ်ပုံကို '' တစ်ဦး-ရှိရမည်အခမဲ့ '' ပုံရိပ်အပေါ်စာသားကို '' ပါ! ဒါဟာသုံးစွဲဖို့ပြည့်စုံပျော်စရာပါပဲ။ အားလုံးအခါသမယများအတွက် Unlimited နှုတ်ခွန်းဆက်ကတ်များကိုးကားပုံများ, အားလုံးအမျိုးအစားနောက်ခံပုံများဓာတ်ပုံဘောင်, စာသားအယ်ဒီတာ, ဆေးသုတ်ဖြီးနှင့်ခဲဖျက်, အပြုံးပုံနှင့်အီမိုဂျီစတစ်ကာများ, ဆန္ဒပုံများ, ကွဲပြားခြားနားသောဖောင့်, အရောင်များ & ပိုကြီးမားတဲ့စုဆောင်းခြင်း။
🎴PHOTO frame အားလုံးအခါသမယ
အံ့သြဖွယ်ဓာတ်ပုံကိုဘောင်အမျိုးအစားအားလုံးကိုဖန်တီးဓာတ်ပုံကိုဘောင်ကိုးကားဓာတ်ပုံဘောင် widget ကဓာတ်ပုံဘောင်ကြီးသားအပေါင်းတို့, တဦးတည်းအတွက်ဓာတ်ပုံကိုဘောင်ဓာတ်ပုံကိုဘောင်ထအားလုံးအမျိုးအစားများ, ဓာတ်ပုံကိုဘောင် 2019 အသစ်ဓာတ်ပုံကိုဘောင်မွေးနေ့ဓာတ်ပုံကိုဘောင်ပျော်ရွှင်မွေးနေ့ဓာတ်ပုံကိုဘောင်ကောင်းသောနံနက်ဓာတ်ပုံ frame ကိုအမည်, ဓာတ်ပုံကိုဘောင်ဥယျာဉ်, နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ, ဓာတ်ပုံကိုဘောင်မေတ္တာနှင့်အားလုံးအခါသမယဓာတ်ပုံကိုဘောင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အခမဲ့ ecards, ဆန္ဒနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားမျှဝေခြင်းဒီ app နှင့်အတူလွယ်ကူသည်။ မွေးနေ့, နှစ်မြောက်, မင်္ဂလာဆောင်, ကောင်းမွန်သောနံနက်, ကောင်းမွန်သောညကောင်းမွန်သောညနေခင်းထိတွေ့နေပါ, ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး, မင်္ဂလာဆောင်, ဗတ္တိဇံ & နာမည်, ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စိုးရိမ်မှု, ကျေးဇူးတင်ကြောင်း, အတည်ပြုချက်, ဂုဏ်ယူပါတယ်, အားပေးမှု, ပထမဦးစွာဆက်ဆံခြင်း, ချစ်ကြည်ရေးကဲ့သို့အားလုံးအခါသမယများအတွက်ဝေမျှမယ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ကောင်းပြီ get, Good Luck, ကျောင်းဆင်းပွဲ, မတ်ေတာ, အလှမယ်သင်, နယူးကလေး, အငြိမ်းစား, ကိုယ်ချင်းစာ, သင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင်၏အတွေးအခေါ်, ဝမ်းနည်းပါတယ်, သငျသညျကိုကွညျ့ပါ, ဒီနှင့်အတူမင်္ဂလာခရီးစသည်တို့အားလုံးအခါသမယအမည်နှင့်ဓာတ်ပုံကိုအတူပလီကေးရှင်းဆန္ဒရှိသော်လည်း။
ဓာတ်ပုံကိုဘောင် & စာသားကိုအယ်ဒီတာ, မေတ္တာဆန္ဒ app ကို, မေတ္တာနှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်ခင်ပွန်းမတ်ေတာဆန္ဒကို, ကောင်းသောညဥ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆန္ဒကို, မွေးနေ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ app ကိုဆန္ဒရှိသော်လည်း, ရုပ်ပုံများနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုးကား Love, မေတ္တာကတ်များ app ကို, မေတ္တာကိုးကား app ကို, မေတ္တာ quotation အပလီကေးရှင်း, ရုပ်ပုံများအဆိုပြု, သငျသညျကတ်များ, မေတ္တာကဒ် app ကို, သင်ကတ်များကိုချစ်ခြင်း, ချစ်ခြင်းကိုးကားအင်္ဂလိပ်လက်လွတ်, WhatsApp ကိုခစျြပုံများ, သငျသညျပုံရိပ်တွေလက်လွတ်, သင်တို့ကိုငါပုံရိပ်တွေကိုခစျြ, သင်တို့ကိုငါဝေါလ်ပေပါကိုခစျြ
IMAGE အယ်ဒီတာ ON 🏖PHOTO
သငျသညျပုံရိပ်ပေါ်ဓာတ်ပုံကို paste သို့မဟုတ်ပုံရိပ်ပေါ်ဓါတ်ပုံ add အပေါင်းတို့နှင့်အခါသမယအခမဲ့လှပသောဓါတ်ပုံကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းကတ်များစေရန်ဤဓာတ်ပုံကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းကဒ်ထုတ်လုပ်သူကိုသုံးနိုင်သည်။ ကဒ်ပေါ်တွင်ပါ pic ကိုဖန်တီးရန်ပုံရိပ်ပေါ်မှာဤဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာကိုသုံးပါပုံရိပ်ကိုအပေါ်ဓာတ်ပုံကိုစာသား, ကဒ်ပြားပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံပုံရိပ်ကို, ကဒ်ပေါ်မှာစာသား, မွေးနေ့ဓာတ်ပုံကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းကဒ်နှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ, နှုတ်ဆက်ခြင်းဓာတ်ပုံကိုထုတ်လုပ်သူဓာတ်ပုံကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား app ကိုပေါ်ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပါ။
IMAGE အယ်ဒီတာ ON 🖌️TEXT
စတိုင်ဖောင့်တွေနဲ့ပုံရိပ်ပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာသားအားဖြင့်သင်၏ကတ်များပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့ပေးပါ။ ပုံရိပ်တွေအပေါ်တစ်ဦးကစာသားကိုရုပ်ပုံပေါ်စာသား, ပုံရိပ်နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအပေါ်စာသား, ဖောင်နှင့်စတိုင်နှင့်အတူဓာတ်ပုံကိုအပေါ်စာသားကိုရေးသားဖို့ app ကို pics အပေါ်စာသားကိုဓာတ်ပုံများပေါ်တွင်ရေးပါ။ pic ကို app ကိုပေါ်ဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာသို့မဟုတ်စာသားပေါ်မှာဤစာသားကိုနှင့်အတူလှပသောအပြင်အဆင်ဖန်တီးပါ။
အားလုံးအမျိုးအစားထဲမှာကိုးကားရုပ်ပုံများအမျိုးမျိုး Explore, ပညာကိုးကား, ကိုးကားဖှယျ, နေ့စဉ်ကိုးကား, ငေါ့ကိုးကား, ရယ်စရာကိုးကား, အဖွဲ့ဟာကိုးကား, ဗုဒ္ဓကိုးကား, အော့ကိုးကား, ဇင်ကိုးကား, ဆန္ဒကိုးကား, အမုန်းကိုးကား, သစ္စာရှိမှုကိုးကား, အသက်ရှင်ခြင်းကိုကိုးကားခြင်း, ချစ်ခြင်းကိုးကား ညဉ့်အခါကိုးကား, image ကိုကိုးကားထုတ်လုပ်သူ pic ကိုကိုးကား, အကောင်းဆုံးကိုးကားအစဉ်အဆက်, အင်္ဂလိပ်အတွက် app ကိုကိုးကား, ကိုးကားခြင်းနှင့်အခြေအနေ, ကိုးကား image ကိုထုတ်လုပ်သူသုတ္တံ & စကား, ရှိသမျှပုံရိပ်တွေကိုးကား, ကိုးကား image ကိုရှာဖွေရေး
app ကိုနှစ်သစ်ကူးရဲ့နေ့အဘို့ကတ်များ Epiphany, စိန့်ပက်ထရစ်နေ့, ကောင်းသောသောကြာနေ့, အီစတာ, မိခင်ရဲ့နေ့, တပ်မတော်နေ့နေ့မနက်စောစော ul fitr, ဖခင်များနေ့, ဇူလိုင်လ၏စတုတ္ထ, အဘိုးအဘှားနေ့, Rosh Hashanah, အမျိုးသားသူဌေးကရှိပါတယ်အောင်ဒီအနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကတ်များ နေ့, ငှက်ကလေးနေ့, ဟယ်လို, စစ်ပြန်များနေ့, ကျေးဇူးတုံ့ပြန်, Hanukkah ခရစ္စမတ်, ပသခါ, သူနာပြုများနေ့အားလပ်ရက်ကတ်များ & အားလုံးရာသီရဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကား။
✍️YOUR Rating & သုံးသပ်ချက်
Google Play စမှာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း | ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ ratings စွန့်ခွာသွားပါ။ ဒါဟာလွန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့3အဖွဲ့ဝင်အသင်းလှုံ့ဆော်မှုနေဖို့ကူညီပေးသည်!
အနည်းငယ်အတွင်းကြော်ငြာများနှင့်အတူဒီ app ကိုအခမဲ့ဗားရှင်း Install: https://play.google.com/store/apps/details?id=realappes.greetingscards
သငျသညျပျော်ရွှင်မှုကို & ကျန်းမာရေးဆန္ဒရှိ!
မတ်ေတာ, App ကိုရေးအဖွဲ့
Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app အား အခ်က္ျပပါ
discorally စတိုး 163 37.2k
Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Appisma Inc
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://sites.google.com/site/warmlyappsprivacypolicy/
လက်မှတ် SHA1: 98:A0:34:B3:3E:32:94:35:92:C0:09:84:64:93:D2:BE:D8:2A:36:CF
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Nawaf Alkeraithe
Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ